Shaashamanneen Agaazii salphiste, ummatas hidhaa hiiksiste - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Shaashamanneen Agaazii salphiste, ummatas hidhaa hiiksiste
Shaashamanneen Agaazii salphiste, ummatas hidhaa hiiksiste
Hooggannoonni OPDO naannoo Shaashamannee dhokatanii jiraachuun beekame.
Sochiin diddaa gabrumma naannoo Oromiyaa addaddaa keessatti akkuma oo’ee itti fuftetti. Ummanni godina Arsii Lixaa magaalota Shaashamannee, Ajjee, Siraaroo, Shaallaa, Abaaroo fi Kofalee guyyoota darbaniif daanditti bayee mirga isaaf gootummaa falmataa jira. Hanga har’aatti dhukaasni Agaaziin ummata irratti banu Shaashamannee fi magaalota naannoo isii dirree woraanaa fakkeesseerra. Ummatta nagaye jedhee ka’e humni woraanaa bobba’e hin jilbiiffachiiifne; sagaleen rasaasaa fi doorsisaan hin bittinsine.
Godina Arsii Lixaatti ummanni humna isaan ukkaamsuudhaaf bobba’e irratti tankarfii fudhateen humna federaalaa afur hujiin ala godhuun gabaafameera. Tankaarfiin ummataa kanaratti hin daangeffamne:Woraana hanga funyaaniitti hidhate afoo gootummaan dhaabachuudhaan hidhamotoota yeroo dheeraadhaaf mana hidhaatti shamaa turaan heddus gadi lakkissiisuu danda’aniiru. Buufata humna woraanaattis ummanni ibiddaan gara daaeaatti geeddaruudhaan Agaazii dirree irratti habniseera. Daandii Shaashamannee fi Roobeen wolqunnamsiisu; akkasumas Shaashamannee fi Ajee, Siraaroo fi Shaallaa geessus cufuudhaan sochii woraana mootummaa danquun danda’ameera.
Gochi gootummaa kuni hundi gatii malee waan dhufee miti. Tankaarfii gara jabeenyaa humnii Agaazii fi Federaalaa ummata irratti fudhateen jiraattonni lubbuu dhabaniiru.
Naannoo Harargee, Guraawwaa fi Kurfaa Calleettis fincilli diddaa gabrummaa cimaan geggeeffameera. Akkuma baratame, humni badii fi gara jabeenyaa, ijoollee fi manguddoo irratti osoo hin hafin tankaarfii fudhateen namoota heddu du’aaf saaxileera.
Wollagga, Amuruttis sochiin ummataa mootummaa abbaa irree sochoosaa ooluun himameera.
Hiriira Arsii Lixaatti geggeeffame, kessummaayyuu isa Ajjee, mootummaan wolitti bu’iinsa ummataa fakkeesuudhaaf olola bal’aa adeemsisaa jira. Akka ummata naannichaa irraa qulqulleeffachuun danda’ameetti sochiin taasifame wolitti buu’iinsa amantaa fi sabummaatiinis wolitti hidhatiinsa tokko akka hin qabne baruun danda’ameera. Gaafii ummataa xiqqeessuu fi xureessuuf mootummaan yeroo addaddaatti tooftaa maqabaleessaatti, amantaa fi sabummaan wolqooduutti hidhuu, dhimma baya.
Previous articleDhaabbileen maqaa praayivetaayzeshiiniin qabeenya ummataa fudhatan qarshii ittiin bitan mootummaa dhoorgachuun gabaafame
Next articleGodina Arsii Lixaatti ummanni halkan-guyyaa qabsotti jira; Agaaziin godinicha Baadimmee fakkeesseera